राष्ट्रभाषा मास्ने पो ठूला विद्वान् ! – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७५ श्रावण ११, शुक्रबार १३:१५ गते
वर्तमानमा नेपाली भाषामाथि एकपछि अर्को गर्दै प्रहार गर्ने क्रम जारी छ । यसमा सचेत, जुझारू तथा उदार अन्य मातृभाषीहरुले आफ्नो मातृभाषासहित नेपाली भाषाको संरक्षण र विकासमा योगदान पु¥याइरहे पनि कतिपयले नेपाली भाषामाथि भइरहेको हस्तक्षेपमा मौनता साधिरहेको देखिएको छ । कतिपयले यसलाई निस्तेज बनाउँदै लगी भाषासँगै जातीय समाप्ति गर्नेतर्फ कदम चालिरहेको अनुभूति हुन्छ । भोलि सम्पर्क भाषारुपी रुखलाई बाढीले बगाउँदा अन्य मातृभाषरुपी हाँगाबिँगा र पात पनि सँगसँगै बग्दै गई महागर्तमा विलीन हुने तथ्यबोध भएजस्तोे देखिन्न । सासूको रिसले पोइको खुट्टा टोक्न खोज्नुलाई के भन्ने ?
तर पनि उनीहरु भारोपेली परिवारमा जोडिएका छन् । नेपालीजस्तै जननी भाषा संस्कृतसँग जोडिएका छन् । सबै एकै आमासँग जोडिएका छन् । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय चरित्रसँग जोडिएका छन् । यसर्थ, जुन तरिकाले लिए पनि उनीहरु नेपाली भाषासँगै छन् । मैथिली, भोजपुरी, अवधी, वज्जिका, ऊर्दू र अरवीहरुसँग जोडिएकाले पनि नेपालीसँग कहीँ न कहीँ उनीहरुको दिलभित्र नेपाली भाषाप्रति ममता र लगाव छ । उनीहरुलाई ढाल बनाएर नेपाली भाषामाथि आक्रमण हुने क्रम जारी छ । अहिले एकता खण्डित गर्ने प्रपञ्च रचिँदै छ । यसपछि पालो अरुको पनि आउने तथ्य छर्लङ्ग छ । षड्यन्त्रपूर्वक कमजोर पार्ने खेल सुरू भएको छ ।
अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव वृद्धि भएसँगै नेपाली भाषा विकृत बन्न पुग्यो । अझ सरलता र सहजता ल्याउने नाउँमा त्रिविवि र प्रज्ञामा आसीन अप्राज्ञिक चरित्रहरुबाटै वर्णविन्यासमाथि ठाडो प्रहार भयो । आप्mनो नाउँलाई इतिहासको विषय बनाउने नाउँमा, पृथक् काम गरेको देखाउने नाउँमा, द्रव्यत्व हासिल गर्ने नाउँमा, विदेशी विश्वविद्यालय परिभ्रमण गर्ने नाउँमा, विश्वसँग आपूm जोडिने नाउँमा, समाजभाषाविज्ञानी बनेको देखाउने नाउँमा आदि । तर, जुनजुन नाउँमा भए पनि नेपाली भाषाको सौन्दर्य स्वाहा बनाउने काम भयो । भाषिक भाँडभैलो मच्चाउने प्रपञ्च भयो । सारा नेपालीलाई यस भाषाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने काम भयो । यसै अभीप्साअनुरुप त्रिविविका नेपाली विभागका भाषा विज्ञहरु भत्काउन अघि सरे । बिस्तारै यो सङ्क्रमणबाट शिक्षा मन्त्रालय पनि प्रभावित भयो । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान पनि अछूतो रहने कुरै भएन ।
विरोधमा आवाज मुखरित हुँदै थियो नै, तर त्यसको प्रभाव कतै परेन । फलतः शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भयो । यसपछि शिक्षा विभागले माध्यमिक तहसम्मका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा र त्रिविले पनि स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्मै आप्mना पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा भद्रगोलयुक्त वर्णविन्यास प्रयोगमा ल्याएरै छोड्यो । डा. हेमाङ्गराज अधिकारी प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा आएपछि प्रज्ञाले पनि यसलाई वैधता प्रदान ग¥यो । प्रज्ञाप्रतिष्ठानकाकै मिलेमतोमा विसं २०७२ सालमा मानक शब्दकोश विकृत तुल्याई अमानक बनाइयो । अमानक तुल्याइएको ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’ (२०४० प्रथम संस्करण)लाई लिएर विभिन्न विद्वान्, विदुषीहरुले आपत्ति जनाए ।
आरोप र प्रत्यारोपको लामै शृङ्खला चले । बहस र छलफल पनि भए । धर्ना र जुलुस निकाल्ने काम पनि भयो । सँगसँगै राजधानीबाहिर पनि गोष्ठी र सेमिनारहरु भए । तीमध्ये एउटा गोष्ठी चितवनस्थित वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा पनि भयो । चितवन लेखक संघद्वारा आयोजित गोष्ठीमा डा. धनपति कोइराला र डा. मतिप्रसाद ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । पुरानै वर्णविन्यास उपयुक्त र वैज्ञानिक रहेको निचोड कार्यशालाको थियो । यसैगरी राजधानी, मोफसल र डायस्पोरातिरबाट पनि दबाब आउन थालेपछि निर्णय गर्दाताकाका मन्त्रालयका शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले क्षमायाचना गर्र्र्र्दै आपूm झुक्किएको प्रतिक्रिया दिए । त्रिवि र प्रज्ञा दुवैले वर्णविन्यास फिर्ता लिन आवश्यक निर्णय लिनुप¥यो । यसबाट नेपाली भाषा आंशिकरुपमै भए पनि विकृत हुनबाट जोगियो । तर विडम्बना ! यति भइसक्ता पनि एन्टिभाइरस निष्क्रिय भएको देखिन्न । पुनः यसका नाउँमा राजनीति हुने क्रम रोकिएको छैन ।
हुन त, सर्वप्रथम प्रश्नपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डयुक्त तुल्याउने नाउँमा नेपाली भाषालाई दुर्बल बनाउने कार्य लोकसेवा आयोगबाट आरम्भ भएको पाइन्छ । यसपछि त्रिविका विभिन्न सङ्कायहरुले नेपाली भाषाको अनिवार्यतालाई खुम्च्याउँदै लैजान थाले । पहिले विज्ञान संकायबाट बहिष्कृत हुन थालेको नेपाली भाषा पछि वाणिज्य संकायसम्म फैलियो । अहिले पठनपाठन हुँदैन । स्नातक तहका मानविकी र शिक्षा संकायबाहेक अन्य कुनै पनि संकायमा नेपाली विषय समावेश छैन । यिनै संकायहरुमा पनि नेपाली विषयमाथि विभेद गरिएको छ । दुवै संकायका पहिलो र दोस्रो वर्षमा १००÷१०० पूर्णाङ्ककै अनिवार्य अङ्ग्रेजी समाविष्ट हुँदा नेपालीचाहिँ किन प्रथम वर्षमा मात्रै त्यो पनि १०० पूर्णाङ्क मात्रै ? यहीँ नेपाली विषयमाथि सौताको छोरावत् व्यवहार गरिएको छ, जब कि झन्डै ७० प्रतिशत नेपालीहरु घर, समाज र व्यवहारमा पनि नेपाली भाषामै विचार विनिमय गर्दछन् । अङ्ग्रेजी विषयकै कक्षामा पनि नेपालीमै बुभ्mने र बुझाउने पनि गरिन्छ । तर, प्रश्न र पाठ्यपुस्तकका सन्दर्भमा भने अंग्रेजीलाई उच्च मह¤व दिने गर्नु कत्तिको जायज छ ? यहाँसम्म कि कतिपय मैथिली, भोजपुरी, तामाङ, गुरूङ, राई, लिम्बू, मगर आदि मातृभाषीहरु जो नीति निर्माण गर्ने तहमा आसीन छन्, जो पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने तहमा छन्, जो कहलिएका शिक्षण संस्थामा कार्यरत छन्, जो ठूला सञ्चारगृहहरुमा छन् र दैनिक पत्रिकाहरुमा प्रुफ रिडरदेखि प्रधानसम्पादकसम्म छन्, जो साना नेतादेखि उच्च राजनीतिज्ञहरु पनि छन्, उनैले पनि आप्mनो मातृभाषा र नेपाली भाषालाई समेत तिलाञ्जलि दिई विदेशी भाषामै गौरव गर्ने गर्दा नै आज साझा भाषाका रुपमा रहेको नेपाली र अन्य सारा मातृभाषा कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । नेपाली भाषालाई स्वाद चखाउने नाउँमा आप्mनो मातृभाषामाथि नै प्रहार गर्नुलाई के भन्ने ? खुलेर बोल्दा मैथिलीले मैथिली, भोजपुरीले भोजपुरी, अवधीले अवधीमा बोल्नु र व्यवहार गर्नुभन्दा हिन्दीलाई मह¤व दिनुलाई कसरी न्यायोचित ठान्ने ? आप्mनी कोखबाट जन्माएकी छोरीलाई उपेक्षा गरी झड्केली छोरीलाई चाट्नु कत्तिको शोभा दिने विषय हो ? यसमा कतै स्वाभाविकता झल्कन्न । बरू, कृत्रिमता र अरु नै कुराको ज्यादा गन्ध आउँछ ।
त्यसो त, पहिले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् छँदै पनि कक्षा ११ बाट नेपाली हटाउने षड्यन्त्र नभएको होइन । त्यस बेला युवा विद्यार्थीहरुले चर्को विरोध गरे । देशव्यापीरुपमा यस निर्णयमाथि भत्र्सना र निन्दा गरियो । प्रदर्शनकारीले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को कार्यालय नै तोडफोड गरिदिए । यसपछि मात्र अनिवार्य विषयका रुपमा नेपाली विषयलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिन परिषद् बाध्य भएको थियो । तर, सुरूमा लोकसेवा आयोगले नेपाली हटाउँदा मौन रह्यौँ । त्रिविविले पनि एकपछि अर्को गर्दै स्नातक तहबाट नेपाली विषय हटाउँदा मौन रह्यौँ । हाम्रो मौनता पनि जारी छ र उसले नेपाली भाषामाथि अन्याय र उपेक्षा गर्ने क्रम पनि अद्यापि जारी नै छ ।
विश्वभरि फैलिएर रहेका आमनेपालीहरुको साझा सम्पर्क भाषा, सरकारी अड्डाहरुकोे औपचारिक भाषा, संविधानले समेत अंगीकार गरिरहेको भाषा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्तरीकृत हुँदै ज्ञानविज्ञानका सबै खाले विषयहरुमा अभिव्यक्ति प्रकट गर्न सक्षम हुँदै गएको, नर्सरीदेखि विद्यावारिधि उपाधिसम्म अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको भाषालाई अझ विकास र विस्तार गर्दै र अन्य मातृभाषाको समेत क्षमता विस्तार गर्दै लैजानुपर्नेमा यसै भाषामाथि नै हमला हुनु, पहिले प्राप्त गर्दै आएको हैसियत कायम गरिराख्न पनि आन्दोलन, धर्ना र जुलुस निकाल्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नु साँच्चै विडम्बनापूर्ण छ ।
अहिले यस्तै हेपाहा व्यवहार देखाइँदै छ, कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम निर्माणमा । त्यहाँ बस्ने विज्ञहरु मानौँ नेपाली होइनन्, उनीहरु विदेशी डलरका उपभोक्ता विदेशी नागरिक हुन् । उनीहरु नेपाली इतर भाषाभाषी हुन् । यसर्थ, उनीहरु नेपाली विषयमाथि दया देखाइरहे छन्, ११ र १२ कक्षामा ५०÷५० पूर्णाङ्क राखिदिएर । नेपाली विज्ञका रुपमा बसेकाहरु पनि फलाना फलानाहरुको व्यवहार नेपालीप्रति असहिष्णुतापूर्ण थियो, तर पनि हामीले बल्लबल्ल मनायौँ र रह्यो नत्र यही पनि कहाँ रहने थियो र ! भनेजसरी प्रस्तुत भइरहेछन् । मानौँ उनीहरुका दृष्टिमा नेपाली त भाषै होइन । यसमा विज्ञान, स्वास्थ्य, वाणिज्य आदि विषयका विषयवस्तु व्यक्त गर्ने भाषिक शब्दभण्डार नै छैन र अभिव्यक्ति क्षमता पनि छैन भन्ने जस्तो व्यवहार गरिरहेछन् । मानौँ, छैनन् नै भने पनि शब्दहरु बन्छन् । बनाउने पद्धति र प्रक्रिया छन् । प्राविधिक तथा पारिभाषिक शब्द ग्रहण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय पद्धति छ । त्यसैअनुरुप जापान, कोरिया, चाइनिज भाषाले आप्mनो क्षमता बढाएका हुन् । हामीले यसो गर्न किन नसक्ने ?
तर बिडम्वना, यसरी नेपाली भाषालाई कमजोर बनाउनमा स्वदेशी भाइ नै मोहोरा बनेका छन् । उनीहरुको अभीष्ट भाषा कमजोर बनाउने र यससँगै जोडिएको राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउनमा लक्षित छ । नेपाली भाषालाई विवादको भुमरीमा फँसाउन खोजिएको छ । यसको आशय अग्रेजी भाषाको विरोध होइन, बरू अंग्रेजीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रुपमा र नेपालीलाई राष्ट्रिय र अन्य मातृभाषाहरुलाई पनि संवद्र्धन गर्दै अघि बढौँ भन्ने हो । जस्तो कि, एक नं प्रदेशमा लिम्बू र राई, २ नं मा मैथिली र भोजपुरी, ३ नं मा नेवारी र तामाङ, ४ नं मा मगर र गुरूङ, ५ नं मा थारु, अवधी र ऊर्दू, ६ नं मा थारु र ऊर्दूलाई उच्च मह¤व दिऊँ । अनि, ७ नं मा नेपाली र त्यहाँ प्रचलित नेपाली भाषाका मार्माली, लेकमेली, डोटेली आदि भाषिकाहरुलाई । तर, यसको विपरीत नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई नै संवद्र्धन हुने खालका यी भाषाहरुलाई नै धरापमा पारेर अङ्ग्रेजी र हिन्दीको अन्धानुकरण गर्नुचाहिँ कदापि सह्य होइन । आप्mना पोष्य औरस पुत्रमाथि ब्रह्मास्त्र प्रहार गरी झड्केला र ग्रामपुत्रलाई पुष्पहार प्रयोग गर्नुलाई कदापि हितकर मान्न सकिन्न र हुँदैन पनि । यहाँ वस्तुले बाली खायो भन्दा पनि पल्क्यो भन्ने चिन्ताचाहिँ मुख्य हो ।
आश्चर्य त के छ भने पञ्चायतकालमा भाषामा पनि एकद्वार नीति अपनाए पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र अन्य मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्रदान ग¥यो । गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको सम्मान दिएको छ । साझा सम्पर्क, अभिलिखितीकरण गर्न र अड्डा अदालत, कार्यालयहरुमा प्रयोग हुने भाषाका रुपमा नेपाली भाषालाई मह¤व दिए पनि ऐन, कानुनले त्यस्तो कतै विभेद गरेको देखिन्न । राज्यले अहिले सबै भाषालाई संरक्षण र संवद्र्धनकै नीति लिएको छ । सर्वोच्च अदालतलगायतका सबै प्रकृतिका अदालतहरुले, मन्त्रालय, संसद्, सरकारी कार्यालय, सबै प्रकृतिका सञ्चार गृह तथा प्रकाशन गृहहरुले पनि नेपाली भाषालाई यथोचित स्थान र उच्च मह¤व दिएको अवस्था छ ।
तर, शिक्षण संस्थाहरुमा भने किन यस्तो विभेद नीति ? शिक्षाविद्, पाठ्यक्रम निर्माता, विषय विज्ञ र लोकसेवा आयोगको नेपाली भाषामाथि किन यत्रो शत्रुतापूर्ण व्यवहार ? नेपाली शिक्षण गर्दा बालबालिकामा बौद्धिक लाभ हासिल नै नहुने ? अंग्रेजीमा शिक्षण गरिए सबल र गुणस्तरवान् नागरिक बन्ने ? नत्र निकम्मा र अचरित्रवान्, देशभक्ति नभएका नागरिक नै उत्पादन हुने हुन् त ? आज हामीले अङ्ग्रेजी शिक्षा दिइरहेका छौँ । त्यो शिक्षा कतै विदेशी नागरिक बन्नमात्र प्रेरित गर्ने किसिमको छैन र ? के हामीले अ्ग्रेजीलाई उच्च मह¤व दिएर माध्यमिक शिक्षापछि हाम्रा छोराछोरी विदेश पढ्न जाऊन्, उतैको नागरिक बनून्, अरुकै देशको गुलामी गरुन्, उतैका अन्धभक्त भई नेपाल त देश नै होइन भन्ने खालका जनशक्ति उत्पादित गरिरहेका छैनौँ र ? कथित गुणस्तरीय शिक्षाका नाउँमा छोराछोरी विदेश पढाएर र उतैको नागरिक बन्न प्रेरित गरी बिरामी पर्दा त परै जाओस्, आपूm मर्दासमेत अर्कैले लास बोक्ने, दागबत्ती दिने र क्रिया पनि अर्कैले गरिदिने वा गर्नै नपर्ने वातावरण बनाइरहेका छैनौँ ? यस्तो अङ्ग्रेजी भाषा जान्नु र बोल्नुलाई मात्र कसरी गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने ठान्यौँ हामीले ? ए प्लस ग्रेड ल्याउनु, विद्यालय प्रथम हुनुलाई मात्र हेर्ने वच्चाको व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ? उसको सामाजिकीकरण भइरहेको छ वा छैन ? जीवन जिउने कलामा ऊ कत्तिको पारंगत भइरहेको छ ? ऊ ज्ञानविज्ञान र प्रविधिमा कत्तिको दक्षता राख्छ ? उसले नाता, उमेर, लिङ्ग, शिक्षा, श्रेणी आदि अनुसार अरुलाई गर्ने व्यवहार सिक्यो कि सिकेको छैन ? परिवार, समाज र देशलाई कत्तिको सम्मान गर्छ ? जस्ता विषय जान्नुलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा नै नभन्ने ? नेपाली विषयबाट वञ्चित तुल्याउँदै हामी हाम्रा सन्ततिलाई कतातिर डो¥याउँदै छौँ ?
अहिले सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी पढाउन थालेपछि विद्यार्थी संख्या बढेको टिप्पणी गरिए पनि ती विद्यालयहरुले उत्पादन गरेका विद्यार्थीले न नेपाली राम्ररी जाने, न अङ्ग्रेजी नै जान्ने भए, केवल कक्टेल भए भन्ने टिप्पणी आएको छ । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढेका छोराछोरी बजार गएर सय रूपियाँको तरकारी किनेर ल्याउने हिम्मत राख्दैनन् । ब्रोइलरवत् उत्पादित विद्यार्थीलाई हामी गुणस्तरीय शिक्षा पाएका ठान्छौँ र अंकलाई ज्यादा जोड दिइरहँदा व्यवहारमा उल्टो नतिजा आइरहेको छ । यसर्थ, स्वदेशी भाषा र संस्कृतिलाई उपेक्षा गरी दिइने शिक्षाले राष्ट्रियता बलियो बनाउनुभन्दा विदेशी भाषिक, सांंस्कृतिक, तथा राजनीतिक दास र कुण्ठित जनशक्ति तुल्याउनमा मद्दत पु¥याउँछ । यसर्थ, स्वदेशको भाषा, कला, संस्कृति, साहित्य, धर्म, दर्शन र माटोलाई अगाध माया गर्ने जनशक्ति निर्माण गर्न स्वदेशी भाषामाथि नै जोड दिनु जरूरी छ ।
वस्तुतः अब ११ र १२ कक्षा विद्यालय शिक्षामा रुपान्तरित भइसकेको परिस्थितिमा पनि यसलाई ५०÷५० पूर्णाङ्कमा सीमित गर्नु नेपाली भाषाप्रतिको हेपाहा सोच हो भन्दा किमार्थ अतिशयोक्ति हुँदैन । जन्मेदेखि मृत्युको घाटमा पुग्दासम्म प्रयोग हुने भाषालाई कमजोर बनाउने खेलमा कतै शैक्षिक योजनाविद्, पाठ्यक्रम निर्माता, विषय विज्ञहरुकै आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कुनै प्रकृतिको मिलोमतो त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पैदा हुन्छ । अङ्ग्रेजी भाषा अपेक्षित छ । तर, यसमा यतिधेरै मोह नराखौ“ । चीन जापानहरुले पनि आप्mनै स्वदेशी भाषामा मात्र शिक्षा दिएर पनि वैज्ञानिक चमत्कार गरेकै छन् । आणविक हतियारका साथै नवीनतम प्रविधि विकास गरेकै छन् । यसर्थ, वैज्ञानिक चमत्कार गर्न भाषा होइन, निरन्तर प्रयास, आँट, त्याग, समर्पण, साधन, स्रोत र प्रतिबद्धताको खाँचो हुन्छ ।
हामीमा आप्mनो देश, भाषा, संस्कृति र नेपालीपनप्रति यत्रो वितृष्णा किन ? किन हामीमा लघु्ताभास ? यसर्थ वितृष्णा र लघुताभास हटाऔ“ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि प्रादेशिक तहमा मातृभाषालाई र संघीय तहबाट कक्षा ११ र १२ दुवै तहमा नेपाली भाषालाई अनिवार्य विषयका रूपमा १००÷१०० पूर्णाङ्कमै समायोजन गर्न निर्देश गर्नुपर्छ । त्रिविले पनि स्नातक तहका सबै सङ्कायमा कम्तीमा कुनै एउटा वर्षमा भए पनि सय पूर्णाङ्कको नेपाली विषय राख्नैपर्छ । आप्mनै आमालाई नानाथरी खोट देखाएर पन्छाउनुभन्दा उनैको सेवा गर्दा नै गुणात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । अर्काकी आमाले चाटेको भन्दा आप्mनी आमाले हप्काएकै प्यारो हुन्छ । हामी नेपालीले नै नेपाली भाषा, नेपालका मातृभाषा र नेपाललाई माया र संरक्षण नगर्ने हो भने हामी कसरी नेपाली बनौँला र ? यसर्थ, मातृभाषामाथि हेपाहा नीति नत्यागेसम्म हाम्रो आत्मिक विकास सम्भव छ र ?